I-Apple ikhangela umphathi wenkqubo ukuya ngqo kusasazo lwenkqubo | Ndisuka mac
UApple unomdla wokuqesha umphathi weenkqubo ukuba akhokele kwaye aququzelele imveliso yakhe kwisitishi esizayo. Akucaci nokuba iya kuwusasaza umxholo onjalo nge-Apple TV njengesinye isitishi, okanye njengenkonzo kwi-Apple Music. Kwiqhinga layo lokusekwa kweqela eliza kuqala eli jelo, iApple inganomdla wokuqesha iinkonzo ze UMichael Lombardo, owayesakuba ngumongameli we-HBO. Abafowunelwa babonakala ngathi baqala ekuqaleni konyaka, xa iApple yaqala incoko noLombardo ukuba "baxoxe ngobuchule benkqubo ka-Apple" ngokweenkqubo zosasazo.
ULombardo unamava abalulekileyo kwicandelo lokumamela kunye nokubona. Kude kube kwangoko i-2106 wayeku-HBO, kodwa washiya isikhundla sokuba ngumvelisi womxholo. Ndifuna indawo esebenzayo ngakumbi ekwenzeni izithuba zoqobo kunye nobuchule. Okwangoku uhambisa umboniso wenethiwekhi ye-HBO njengomvelisi, kodwa isicelo sika-Apple sinokumenza axabise, abuyele kwizikhundla zokuququzelela umxholo.
I-Apple iyavuma ukuba ikwinkqubo esebenzayo ukwenza isikhundla, ekucaca ukuba bacebisa uLombardo, oza kuphendula imibuzo ebibuzwa licandelo lokumamela kangangeenyanga, malunga neApple
Ngelixa inkampani iqale iiprojekthi ezithile ngokubonisa ifomathi enje nge «Iplanethi yeapps»Okanye uthotho«IQumrhu leCarpool«, Uninzi lwaseHollywood luyadideka ukuba kanye kanye yintoni kanye kanye uApple afuna ukuyenza ngemveliso yevidiyo. Imibuzo imalunga nokuba iApple ifuna ukuya kude kangakanani ukwenza iinkqubo zayo kunye nokuba ifuna ukukhuphisana neNetflix, iAmazon kunye neHulu.
Okwangoku ukucwangciswa kukwiindawo zayo zokuqala, okanye iApple igcina naliphi na isenzo siyimfihlo kakhulu, ukuze ingabonakali. Ngokunxulumene nolwazi esinalo, ngoJanuwari Cook wathi uvavanya ezinye iindlela ezahlukeneyo. Ekuqaleni kuka-Meyi, wabhengeza ukuba uvavanya umxholo oveliswe ngabo, kwaye emva kovavanyo lokuqala, uya kuthatha izigqibo.
Nokuba yeyiphi na indlela, ezi ndaba zisixelela ukuba iApple ifuna ukuba nejelo lomxholo kwaye ithembele kwezona ngcali zibalaseleyo kwicandelo ukuzama ukusothusa, njengoko siqhele ukwenza njalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-Apple ifuna igosa eliyintloko lenkqubo ukukhokela inkqubo yosasazo
Izicelo ezibini ezithandekayo ekunikezelweni ongasayi kuphoswa zizo